Retenção de Líquido: Sintomas, causas, alimentos que ajudam e como se livrar dela definitivamente! - Suplementos Brasil
Fitazomana ranoka: soritr'aretina, antony, sakafo manampy ary ny fomba fanariana azy indray mandeha sy maharitra!
8 Oktobra 2018
fihazonana rano dia mety hitranga noho ny antony maro toy ny fiainana mipetrapetraka, olana ara-pahasalamana, olana hormonina, tsy fihinanan-tsakafo sy ny hafa. Ato amin'ity lahatsoratra ity jereo ny antony, ny tena soritr'aretina sy ny zavatra tokony hatao mba hialana amin'ny fivontosana.
Ny fihazonana ny tsiranoka dia ranon-javatra be dia be voangona amin'ny fomba mihoapampana sy tsy ara-dalàna eo anelanelan'ny sela ao amin'ny vatana, izay hahemotra amin'ny fotoana fohy. Ny fambara voalohany dia ny fivontosana, hita indrindra amin'ny tongotra, tongotra, kitrokely ary kibony.
Mitranga io olana io rehefa manjary mibontsina ny lalan-dra izay manify, izany hoe tena tery tokoa, ka mivoaka ny tsiranoka ao amin'ilay sela ao anaty.
Fambara ny fihazonana tsiranoka
Ny fambara lehibe hitazonana ny tsiranoka dia ny edema (mamontsina), izay hita manerana ny vatana na amin'ny faritra sasany amin'ny vatana. Matetika ireo izay mijaly noho io olana io dia mahatsikaritra ny fivontosan'ny faritra amin'ny vatana, izay mora tohina kokoa amin'ny rano.
Miasa toy ny masinina tonga lafatra ny vatantsika. Na dia manana fomba maro aza izy mba hahazoana antoka fa tsy manimba azy ny fiovana amin'ny fandanjalanjany, misy fomba ampiasainy hanondroana fa misy zavatra ao amin'ny vatantsika izay tsy dia mety loatra.
Amin'ny fotoana hitazomana ny tsiranoka dia tsy maintsy milaza isika fa misy zavatra tokony hatao hanovana io toe-javatra io. Ny antony mahatonga ny fihazonana tsiranoka dia:
Ny olana tiroida dia miteraka karazana fivontosana hafahafa;
Fomba fiaina mipetrapetraka;
Zava-pisotro misy alikaola be loatra;
Fihinanana sira be loatra;
Fampiasana fanafody sasany, toy ny mifehy ny tosidra;
Amin'ny tranga sasany, ny fivontosana madinidinika dia manana antony manokana, toy ny lalan-dra tsy mandeha tsara.
[junkie-tabs] [junkie-tabs title=”NY VATANAO NOHO NY TAMIN'NY 2 herinandro voalohany!”] Raha mitady hanadio ny vatanao ianao, very refy, hampitsahatra ny fitehirizana rano ary tombontsoa maro hafa, TSY MAINTSY mahafantatra ny ☛ DETOPHYLL!! ☚ Fanampiny NATURAL izay hanova ny fiainanao!! [/junkie-tabs] [/junkie-tabs]
Mba hisorohana ny fihazonana tsiranoka dia zava-dehibe ny fanarahana fahazarana mahasalama toy ny fampiharana ny hetsika ara-batana, mampihena ny fihinanana sakafo misy sira ary mampitombo ny fihinanana sakafo misy magnesium sy sakafo diuretic.
Zava-dehibe izany misotroa rano betsaka, izay hampiroborobo ny fiasan'ny taova mety toy ny voa, mampitombo ny fiforonan'ny urine. Amin'izany dia hanampy amin'ny fivezivezena izy io, hisorohana ny fihazonana ny tsiranoka.
fitehirizana tsiranoka amin'ny fitondrana vohoka
Ny famantarana ny fihazonana tsiranoka amin'ny fitondrana vohoka matetika dia mipoitra aorian'ny volana fahadimy, ary matetika dia tononina ao anatin'ny andro vitsivitsy aorian'ny fiterahana. Izany dia satria ampahany amin'ny lanja azon'ny vehivavy bevohoka amin'ny faran'ny fitondrana vohoka dia tsiranoka.
Ny antony mitazona ny tsiranoka mandritra ny fitondrana vohoka dia mety hiova arakaraka ny vehivavy bevohoka tsirairay. Anisan'ny antony ny fiovan'ny hormonina, ny akanjo sy kiraro tery, ny fampiasana fanafody sasany, ny fihinanana sakafo masira, sns.
Eo amin'ny tarehy
Ny tarehy koa dia faritra iray amin'ny vatana izay mijaly noho ny fihazonana ny tsiranoka. Ny fivontosana dia mitranga amin'ny antony maro, ao anatin'izany ny fampiasana pilina fanabeazana aizana, fisotroana alikaola, fanovana makiazy, torimaso kely, olana amin'ny hormonina ary tsy fahampian'ny collagen.
Amin'ny ankapobeny, ny fivontosana eo amin'ny faritry ny tarehy dia vokatry ny fihenjanana amin'ny hozatra, izay manimba ny rafitry ny lymphatic, miteraka fihazonana ny tsiranoka.
Matetika ny fihazonana ny tsiranoka amin'ny tongotra dia satria manjary mirehitra ny sela noho ny fisian'ny poizina, manangona tsiranoka ary mampihena ny fahafahan'ny fiverenan'ny lalan-drà. Vokatr'izany dia lasa mivonto sy mankarary ny tongotra.
Ny kibo no faritra manangona ny tsiranoka betsaka indrindra, ateraky ny fiainana mipetrapetraka sy ny tsy fihinanan-tsakafo. Na izany aza, ny fihazonana ny tsiranoka ao amin'ny faritry ny kibo dia mety hanondro olana ara-pahasalamana lehibe toy ny aty, ny voa, ny fo, ary na ny homamiadana aza.
Noho izany dia ilaina ny mitady dokotera hanao fanadinana ary hahafantatra ny anton'io fihazonana io.
Ny fihenjanana mialoha ny lahy sy ny vavy dia mety ho antony iray hafa koa miteraka fanangonana tsiranoka. Izany dia mitranga satria ny progesterone, izay ny hormonina vehivavy, dia mitombo izay miteraka edema, izay matetika no mitranga ao amin'ny kibo, tratra ary tongotra.
Cortisol dia hormonina izay, rehefa be dia be ao amin'ny vatana, dia mety hotazona ny tsiranoka.
Sakafo hampitsaharana ny fihazonana ny fluid
Mba hisorohana na hampihenana ny fihazonana ranoka dia ilaina ny mihinana sakafo manankarena amin'ny potasioma. Mineraly fototra ho an'ny vatana izy io, ary manana adidy lehibe ilaina izany. Mikasika ny fihazonana tsiranoka, io mineraly io dia manafoana ny haavon'ny sodium ao amin'ny vatana ary mampitombo ny fiforonan'ny urine.
Ny sakafo hafa izay manampy amin'ny fanafoanana ny fihazonana rano dia voankazo toy ny watermelon, akondro, cantaloupe, mananasy ary voaloboka. Ny legioma toa ny ravina mainty miampy kôkômbra sy zucchini, satria manankarena amin'ny rano izy ireo.
Ny teas dia ao anatin'ity lisitra ity ihany koa, satria mpiara-miasa manandanja amin'ny fitazonana tsiranoka. ianareo hibiscus, artichoke, dite maitso, persily ary manampy ny carqueja satria diuretika izy ireo, manala ny fanangonana tsiranoka ao amin'ny vatana.